နွေ ဦး ရာသီအတွက်သင့်ဗီရိုကိုဖြည့်ရန်စနီကာများ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Paco မာရီယာ Garcia က | | Calzado, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ပုံ
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ တ်ရုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်သွားသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖိနပ်စီးရန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာ run ရန်ရည်ရွယ်သောအခါများစွာသောလူတို့သည်လည်းများသောသူများဖြစ်သည် သူတို့ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူသွားကြဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ငါတို့ရှိသမျှသိသည်နှင့်အညီ၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးများသည်၎င်းတို့၏မော်ဒယ်များကိုဖက်ရှင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဖြစ်ရာယနေ့တွင်၎င်းတို့အားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူသောကွဲပြားသောမော်ဒယ်များကိုဖော်ပြရန်မတူညီသောအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စနီကာကိုနှစ်သက်သူဖြစ်သော်လည်းသင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောအရောင်များနှင့်အရောင်များကိုသင်ရှာမတွေ့ပါကဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားပြသမည်။ သငျသညျအာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်သည့်နှင့်အတူ Sneaker သုံးမော်ဒယ်များ ၎င်း၏ထူးခြားသောအရောင်များအပြင်၎င်း၏သီးသန့်အတွက်အရာအားလုံးထက်သံသယမရှိဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကအားကစားအတွက်မလေးပါဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဖိနပ်တစ်ချောင်းလိုဖြည့်စွက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
1 Nike လေတပ် 1 အနိမျ့တောက်ပ Citron
2 Adidas ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု Royal Blue
3 New Balance 247 အားကစား
4 Adidas စူပါစတား
5 Nike လေကြောင်းဂျော်ဒန်
9 New Balance ၅၇၄
10 Onitsuka ကျားမက္ကစီကို 66
13 ဗစ်တိုးရီးယား Inglesa ပတ္တူ
Nike လေတပ် 1 အနိမျ့တောက်ပ Citron
ကျနော်တို့ Nike ရဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Nike၊ Air Force 1 Low Bright Citron နဲ့အတူစပါတယ်၊ သူတို့နာမည်ကဖော်ပြပေးတဲ့ဖိနပ်က citrus အဝါရောင်အရောင်, ခြေကျင်းကိုပြသတဲ့ဂန္ပုံသဏ္withာန်နှင့်အတူ။
Adidas ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု Royal Blue
ကျနော်တို့ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Adidas နှင့်တော်ဝင်အပြာရောင်မော်ဒယ်နှင့်အတူဆက်လက်။ ဒီမော်ဒယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း ဂန္ပြိုင်ကားဆန်သောဒီဇိုင်း ဒီတောက်ပသောအပြာနှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့အတိုင်း garish အရောင်များကိုအရှုံးမပေးဘဲ,
New Balance 247 အားကစား
အောက်ပါတို့မှအားကစားဖိနပ်တစ်မျိုးဖြစ်သော New Balance 247 Sport နှင့်အခြားအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ဖိနပ်များဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ဂန္အားကစားပုံစံ ကုမ္ပဏီ၏အနက်ရောင်လက်မှတ်လိုဂိုနှင့်အတူလိမ္မော်ရောင်တောက်တောက်ရှိသည်။
၁၉၆၉ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကစူပါစတားဟူသောစကားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိလှ။ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ် စစ်မှန်တဲ့ Adidas သင်္ကေတဖြစ်လာတယ် နှင့်အချိန်ကျမ်းပိုဒ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
နာမည်ကျော် NBA ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား အမေရိကန်တစ် ဦး စစ်မှန်စတိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေနှင့်သူသည် NBA သို့ခုန်ချမည့်အချိန်တွင်သူသည် Adidas နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးသူအကြိုက်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Nike ကရှေ့ကပြဇာတ်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်ရောက်သော်ဂျော်ဒန်သည်ချီကာဂိုနွားထီးများတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမကြုံစဖူးသောစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖိနပ်နှင့်အဝတ်အစားတစ်လိုင်းဖန်တီးသော Nike က။ ပထမဆုံးဂျော်ဒန်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
သို့သော်ဤဖိနပ်များက ပို၍ ပင်သမိုင်းပေးခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအရောင်စည်းမျဉ်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဂျော်ဒန်ကို NBA မှဒဏ်ငွေပေးသောကြောင့်သူတို့မှာနာမည်ကြီးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေအရစျေးကွက်ထဲကိုသူတို့ထွက်လာတာနဲ့အမျှဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ရောင်းအားရခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်သူတို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည် ကျနော်တို့ထက်ပိုမို 28 ကွဲပြားခြားနားသောနှစ်ပတ်လည်ဗားရှင်းကိုငါသိ၏။
Su လှပသောမီးခိုးရောင်ဝတ်စုံဂျာကင်အင်္ကျီတွင်ခေတ်မီအလုပ်အမှုဆောင်နှင့်အတူအစက်အပြောက်, နှင့်အချို့သောအားကစားလေကြောင်းဘွတ်ဖိနပ်, ဘရွတ်ကလင်းကနေမန်ဟက်တန်အထိ Hudson မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး, ကြော်ငြာမီဒီယာအတွက်အလွန်ကိုအောကျမေ့။
အကြောင်းပါ Melanie Griffith နှင့်ရုပ်ရှင်သည် "Guns of Woman" ဖြစ်သည်” အဲ့ဒီ ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာသင်အားကစားခန်းမကနေထွက်ပြီးအားကစားမှာအလုပ်သွားလုပ်နိုင်တယ်။
Reebok ကဒီပုံစံကို "Freestyle"၊အလွန်နူးညံ့သောအရေပြားနှင့်အတူအမျိုးသမီးခြေ, အဘို့ပေါ့ပါး။ ပါးလွှာသော velcro စွဲနှစ်ခုနှင့်ခလုတ်ခုံပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည် သူတို့ကထိုအချိန်ကဖိနပ်စီးသူများနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ, ပိုမိုကျယ်ပြန်, မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောတန်ချိန်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့နေရသည်။ အားကစား သူတို့မရှိတော့သီးသန့်အားကစားလေ့ကျင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်လှိုင်းတံပိုးထိပ်တွင်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ရေးပဲ။
ဒီ Nike မော်ဒယ်ရှိခဲ့ပါတယ် အရေးကြီးသောရုပ်ရှင်ကိုးကား။ အခြားအရာများထဲမှ, သူတို့ကအရမ်းသောသူတို့ဖြစ်ကြ၏ "Back to the Future 2" မှ Michael J. Fox ဤဒဏ္myာရီဆန်ဒနီများသည်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုပေးခဲ့သည် Self- ဖောင်း, Self- ညှိ နှင့်အခြားဆန်းသစ်တီထွင်မှု။
အဆိုပါ Stan Smith မော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့သည် Adidas သမိုင်းတစ်လျှောက်အရောင်းရဆုံးတင်းနစ်ဖိနပ်ဖြစ်သည်။ ဒီမော်ဒယ်၏ဂန္ထဝင်ဆုံးဗားရှင်းကို ၂၀၁၄ တွင်၎င်း၏ပုံမှန်ကြော့ရှင်းမှုနှင့်အတူပြန်လာခဲ့သည်။
Stan Smith သည်တင်းနစ်ကွင်းများ၌သာမကလမ်းပေါ်တွင်စံနမူနာပြအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် အလွန်အောင်မြင်သော Adidas မော်ဒယ်၊ အားကစားနှင့်ဖက်ရှင်လောကမှဖြစ်သည်။
New Balance ၅၇၄
ဒီမော်ဒယ်သင်္ကေတ မူရင်းနှင့်လိမ္မာပါးနပ်, 1988 ခုနှစ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များနှစ်ခုပေါင်းစပ်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ဝတ်စားဆင်ယင်သူတိုင်းအားသူတို့၏စတိုင်ကိုဆက်လက်သယ်ဆောင်ကြသည်။ ယနေ့သူတို့ဖြစ်ကြသည် 80 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်၌၎င်း, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦး စားပေးမှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
Onitsuka ကျားမက္ကစီကို 66
ဤ ကုမ္ပဏီကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းစစ်တပ်မှဖွဲ့စည်းသည်l နှင့်အားကစား၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြီးစွာသောလေ့လာသုံးသပ်သည်။ မက္ကစီကိုတွင်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှစ်နှစ်အလိုတွင်သူသည် Limber ပုံစံသားရေဖိနပ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားဖိနပ်, "မက္ကစီကို 66" ဟုခေါ်သည်", နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းအားကစားသမားများ၏အကြိုက်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ အနှစ် 50 အကြာတွင်ယနေ့, သူတို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, ပစ္စည်းများနှင့်ပုံစံများပေါင်းစပ်ပိုပြီးခေတ်မီမော်ဒယ်များ.
မက္ကဆီကို ၆၆ ကိုလက်ရှိအသုံးပြုမှုဥပမာတစ်ခု။ ငါဝတ်ဆင်သူများ Uma Thurman မှ "Bill Kill ။ "
၎င်းသည် ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ကြက်တစ်ကောင်ဖြစ်သော Le Coq Sportif Milos ဖြစ်သည် အားကစားပုံစံနှစ်မျိုးဖြစ်သော Tours နှင့် Milos။ ဤအမော်ဒယ်များအားဖြင့်အောင်မြင်အောင်မြင်မှုပြီးနောက် အသစ်စပျစ်သီးကိုစုဆောင်းခြင်း၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏အအောင်မြင်ဆုံးဒီဇိုင်းများမှစတင်ခဲ့သော“ retro-runner” ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်နိုင်သောစတိုင်၏အထင်ကရဖိနပ်များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ဒီဖိနပ်တွေကိုလုပ်ထားတယ် ရုပ်ရှင်ရုံကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်ကျော်ကြား။ ဒါဟာငါဝတ်ထားခဲ့တဲ့ဖိနပ်အကြောင်းပါ “ Forrest Gump” ပြီးတော့တစ်နိုင်ငံလုံးကိုကမ်းခြေကနေကမ်းခြေအထိပြေးဆွဲခဲ့တယ်။
၎င်းတို့သည် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များက Los Angeles မြို့၏လမ်းမကြီးများဖြစ်သည်။ အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်လက်တင်လမ်းဂိုဏ်းတို့၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ၇၀ ကျော်သောဖက်ရှင်ပြန်ပေါ်လာသည့်နောက် Nike Cortez သည်ယနေ့တွင်အင်အားအပြည့်အ ၀ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ဗစ်တိုးရီးယား Inglesa ပတ္တူ
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်သွားသည်။ ၁၉၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်နှစ်များ၌သူတို့ဖြစ်ခဲ့ရသည် ကျယ်ပြန့်နွေရာသီအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏လိုဂိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသော်လည်း, ဗေဒအတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ၎င်းတို့ကိုအရောင်များစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သောနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင်ရောင်းချသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » Calzado » နွေ ဦး အတွက်သင့်ဗီရိုကိုဖြည့်ရန်သင်တန်းနည်းပြများ